१२ कक्षा मात्र पास गरेका करोडौंको मालिक आमिरको सबैलाई चकित पार्ने १० रोचक तथ्य – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: १२:४७:०५
बलिउड फिल्म क्षेत्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय नायकको रुपमा चिनिन्छन् आमिर खान । आमिर खानलाई मिस्टर पर्फेक्ट्निस्टको नामले पनि चिनिन्छन् । आमिर आफैमा अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गायक र प्रोडक्सन संस्थापक पनि हुन् । आमिरका बाहिर नआएका केही रोचक तथ्य यस्ता छन् । १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका खानले बलिउडमा भने राम्रो छाप छाडेका छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
१. आमिरले फिल्मी क्षेत्रमा पाइला टेकेपछि २० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक अनस्क्रिन किसिङ सिन दिएका थिए । सन् १९८४ मा फिल्म होलीको लागी उनले उक्त दृश्य दिएका थिए । जुन दृश्य एकदमै भद्दा देखिन्थ्यो ।२. आमिरले मागअनुसार तिन हप्तामै १३ किलो तौल घटाएर सबैलाई चकित पारेका थिए । उनी आफ्नो तौल शुटिङको क्रममा ९५ केजी बाट ८२ केजी तौलमा झार्न सफल भएका थिए । यसको रोचक कारण भने उनले गरेको काम, सुत्ने र खाने समय तालीका रहेको बताएका थिए ।३. आमिरलाई सामाजिक कार्यमा रुचि राख्छन् । आमिर दयालु कलाकारको सुचिमा पर्छन् भने केहि समयअघि उनले प्रोजेरिया नामक रोगबाट पिडित निहाल विट्लालाई भेटि उपचारमा सघाएका थिए । त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा टिम निहाल नामक फेसवुक पेज समेत बनाए । हाल उक्त पेजमा रोगले ग्रसित अन्य व्यक्ति पनि सामेल छन् ।४. आमिर बच्चादेखि नै लजालु स्वाभावका थिए । छिमेकीका बालबालीकासंग समेत खासै घुलमिल हुदैनथे । उनलाई सानोमा केटीको स्कुलमा पठाइएको थियो । त्यसैले आमिर केटा भन्दा केटी साथिसंग बढी घुलमिल हुन्थे ।
५. सन् २००१ मा भएको अक्षय कुमार र ट्विंकल खन्नाको विवाहमा आमिर भिडियोग्राफर बनेका थिए । आमिर र ट्विंकल दुवैले सन् २००० मा फिल्म मेलामा संगै अभिनय गरेका थिए ।६. टिभि कार्यक्रम ‘बडे अच्छे लग्ते हे’ बाट चर्चा कमाएकी साक्षि तन्वार फिल्म दंगलमा आमिरको अनस्क्रिन पत्नि बनेकी छिन् ।७. खबरका अनुसार बहुचर्चित हलिउड अभिनेत्री एम्मा वाट्सनले बनाउन लागेको बलिउड वायोपिकमा आमिर क्राईम रिपोर्टर बन्नेछन् । तर एम्मा र आमिर दुवै संगै देखा पर्ने छैनन् ।८. सानोमा आमिरलाई रिना नामकी युवतीले मन पराउथिन् र दुवैले कसैलाई जानकारी नदिकन लुकेर विवाह गरेका थिए । विहेको १५ वर्षपछि उनले तलाक दिदै सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए । त्यसपछि उनले दोस्रो विवाह किरण रावसंग गरे ।९. अमिरलाई चेस र टेनिस खेल एकदमै मन पर्छ । आफु फिट रहनको लागी भने ब्याडमिन्टन् खेल्ने गर्छन् ।१०. आमिर काम गरिरहेको बेलामा कहिल्यै घडि हेर्दैनन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,